जसले पार्टी दिए, रक्सी धोकेर उसैलाई मारिदिए, 'बाइक र जिएफ कसको राम्रो ?' भन्नेमा विवाद (भिडियो) - Gandak News
जसले पार्टी दिए, रक्सी धोकेर उसैलाई मारिदिए, ‘बाइक र जिएफ कसको राम्रो ?’ भन्नेमा विवाद (भिडियो)
गण्डक न्यूज द्वारा १ असार २०७७, सोमबार २३:१४ मा प्रकाशित 0
पोखरा २९ पट्नेरीका अमित रसाइलीलाई बाइक गुडाउने मोह अति थियो । उनले घरमा बाइक किनिदिन भनिरहन्थे । परिवारले दुःख सुख बाइक किनिदिए । तर त्यही बाइक किनेको खुशी बाँडेका साथीहरुकै हातबाट टाउको नै थिलो थिलो हुने गरी प्राण त्याग्नुपर्छ भन्ने उनलाई के थाहा ? जसलाई खुवायो, उनीहरुले नै मातेर आफैलाई मार्छ भन्ने अमितलाई के पत्तो ?
जेठ ३१ गते उनले आफू निकट ४ साथीभाइलाई पार्टी दिन्छु भने । सबैलाई फोनमा भने, बागमारा चौरमा बस्ने है भनेर योजना सुनाए । घरमा आमा र हजुरआमालाई आज म साथीकै घरमा बस्छु है भनेर निस्किए । हजुरआमाले त नजाउ बाबु भनेकी थिइन् । तर, भोलिदेखि कतै निस्किन्नँ है आमा भनेर अमित निस्किए ।
पोखरा ३३ बागमारा चौरमा २० वर्षे मनीष श्रेष्ठ, २१ वर्षे सुनम गुरुङ, सोहि वर्षका शंकर सुनार, कृष्ण सुनार आइपुगे । यी चार जना असाध्यै मिल्ने साथी हुन् । घरमै आउजाउ हुन्थ्यो । घरेलु मदिरा, चाउचाउ र चुरोट किन, राति ९ बजेतिर चौरमा पुगेका उनीहरु मदिरा पिउन थाले । मात चढ्दै गएपछि अन्तरंग कुराकानी सुरु भयो । साथीहरुबीच कसको बाइक राम्रो ? कसकी गलफ्रेण्ड (जीएफ) च्वाँक भन्ने प्रसंगहरु उठेको अभियुक्तको भनाई उदृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ । आआफ्ना बाइक र प्रेमिका राम्रा भन्ने विषयले चर्किएर झगडाकै रुप लिएको थियो । त्यसपछि सबै मिलेर अमितको टाउकोमा हेल्मेट र ढुंगाले हाने । अमितको प्राण उडेपछि शव लुकाउन खोजे तर ठाउँ पाएनन् । त्यसैले, नजिकै तल सेतीसम्म लगेर बगाइदिए ।
राति साढे ३ बजेको समयमा प्रहरी कन्ट्रोल रुम १०० मा साथीहरुले नै फोन गरे। प्रहरीलाई पहिलो शंका नै त्यही भयो । रातिको समयमा साथीहरुले नै हरायो भन्नुको कारण सामान्य विषय होइन । परिवारलाई यसबारे थाहै थिएन । प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर अमितको खोजी गर्दा आइतबार बिहान ७ बजे पोखरा ३२ रातोपैरास्थित सेती खोंचमा शव भेटिएको थियो ।
सोमबार प्रेस कन्फरेन्समार्फत कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीले अमितको हत्यामा संलग्न ४ जनालाई सार्वजनिक गरे । उनीहरुलाई कारबाही बढाइएको एसपी कार्कीले जानकारी दिए ।
लकडाउन अवधिमै आफ्नै साथीबाट हत्या भएको यो घटना पोखरामा तेस्रो हो । नयाँ वर्षकै दिन पोखरा १४ समिनताराका विमल रानाभाट हराएकोमा जेठ ३ गते मात्रै उनको शव सडेगलेको अवस्थामा भेटिएको थियो । उनको हत्या आफ्नी श्रीमतीसँग लसपस गरेको भन्दै मितज्यू भनिएका मित्र ज्ञान बहादुर परियार लगायतले नै गरेका थिए ।
पोखरामा श्रीमतीसँग सल्केको भन्दै ‘मितज्यू’ भनिएका साथीकै घनले हानेर हत्या (भिडियो सहित)
त्यसपछि, पोखरा २६ सुन्दरीबजार बस्ने सुजन बिक पनि आफ्ना दुई साथीहरुबाटै जेठ ३ गते मारिएका थिए र उनलाई पनि गाडेको अवस्थामा जेठ ६ गते भेटिएको थियो । यी सबै घटनामा मदिरा नै प्रमुख कारण बनेको छ ।
पोखरामा सुजनलाई मारेर गाड्ने प्युठानका २ पक्राउ, सँगै रक्सी खाँदा झगडा (भिडियोसहित)